को हुन् रातारात भाइरल भएका जोडी ?
सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा गीतमा लिपसिङ गरेर एउटा जोडी भाइरल भइरहेको छ । अझ विशेष गरी टिकटकमा बढी चर्चा भएको छ ।
यो जोडी हो तान्जानियाका किली पल र उनकी बहिनीको । बलिउडका म्युजिक डाइरेक्टर तनिष्क बागचीले ‘शेरशाह’ चलचित्रका लागि ‘राता लम्बिया’भन्ने गीत बनाएका थिए ।
जब किली र उनकी बहिनीले यो गीतमा लिपसिङ गरे तब यो गीत भाइरल भयो । सँगै दाजु र बहिनीको जोडीले पनि अहिले चर्चा पाएको छ ।
यतिमात्र होइन तनिष्कले किलीलाई म्यासेज गरेर सोधे– यो तपाईं दुई जनाको भिडियो हो ?
तब किलीले रिप्लाई गरे– हो तर कसैले क्रेडिट दिँदैन ।
त्यसपछि तनिष्कले किलीलाई भने– लेट्स डु समथिङ टुगेदर
किली आफ्नो सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट र टिकटकमा २८५ वटा भिडियो पोस्ट गरिसकेका छन् । यी दुई दाजुबहिनीको भिडियो भाइरल भएपछि फ्यान फलोइङ पनि बढेको छ । अहिले एक लाख भन्दा बढी फलोअर छन् ।